Author: Meztilrajas Maugor
Kaleessa dogoggoraan jaalala dhabdeef Waaqayyo waan dhubaa ishee hin miine; dhalaan ishee kiiseeraan. Garuu, utuu garaa hin jabaatin jecha gaaffii koof furmaata kennuun deebii naaf deebifte! Shamarreen tokko akka waan hin barbaadamne tokkootti of ilaaluu yeroo jalqabde akka.
Bakka ati mul’attu hundatti akkan si wajjin mul’adhuuf adaraa kee ofirratti ‘tag’ na godhi. Jaalalli anaaf haaraa ta’uu baatullee siif haaraadha! Jaalala keessa jirtan qabxiilee kanniiniin wolbira qabaa madaallii mataa keessanii itti laataa. Abbaan manaa ishee ammaa kun faallaa jaalallee ishee isa jalqabaati.
All Fayyaa fi Hawaasa Jaalala. Qabxiilee 12 jaalala cimsan, jireenya midhaagsan Dec 12, Waanuma fedheefuu hiriyyoota kee warra kottu magaalaa keessa deemna jedhanii’invite’ si godhan immoo hin dhaggeeffatiin.
Akka namni nu gidduu seenee walitti dhufeenya keenya ‘block’ hin goone cimsii of eeggadhu. Baay’ee dubbadheef suusii nan baasu. Koo an kanin jedhu ani nama jaalladhee beeka, warran duukaa jaalala dhamdhamaa tureyyuu baay’eesaanii kaniti beektu ofiinan dhiisee gale. Iji koo erga si argee kunoo bubbuleera!
Erga dubbiftan booda ‘like’, ‘share’ ‘comment’ godhuu hin dagatinaa. Dhalli ishee kun isheef waa hedduudha. Otuu erga mariidhaan ‘join’ wal goonee booda banatte ta’ee gaarii ture. Ammammoo carraa hojiitiin ittuu sirraa fagaadheen jira! Miidhaafi hubaatii irraas kan nama tiksu isuma jaalala dhugaati. Jaalalli dhugaa waan akka salphatti argamu ykn bira gayamuu miti.
Galmee Jaalala Dhugaa” added a new photo. Karaan gabaabaan akka amna dheeraa natti fakkata.
Sammuuko Nanyaatee Boqonnaa Nadhowwa Ummannii Tarii waa natti jaxlala ati? Gammachuu guddatti kan nama geessu jaalala dhugaati. Icciitii kee immoo anarraa kan darbe nama tokkofiyyuu ‘share’ hin godhiin. Silaaaddunyaan tun hundi jiraachuu baattee ati qoftiin jiraattee naafgahaadha. Sin jaalladha jedhus jaalala isaa waan ittiin argitu hin qabdu; kabaja dhiirri Jaalallee isaaf qabuu osoo itti hin agarsiisin itti heerumte; akka haadha manaatti osoo hin taane akka warteessuutti ammoo waliin jiraata jirti.
Yaada garaa koo wajjinis si qofatu ‘chat’ gochaa oola. Gorsa koo kana hunda immoo ‘upload’ gootee ‘wall’ kee irratti akka mul’istu abdiin qaba. Bakka jaalale qabadhu wajjumaan taphadhe dhiisu barbaada 5. Waa’ee sabboonummaa kee irratti ‘comment’n siif kennu hin qabu.
Barattoonni Yunivarsiitii 16 balaa konkolaataan dhuman. Monday, December 31, Kee kun garuu djugaa yeroon si faana taphadhee dabarse utuun hin qabaatin attamitti akkas na waxale! Ani ergan si jaalladhee eegalee hanga harraatti guyyaa tokkollee duugaa jaalallee kootti harka si qabadhee si waliin bashannanee akkan hin beekne ni beekta! Awash Post Oromo News. Waggooti lakkaawwaman; baroonni darban. Yoo didanii si rakkisan ‘unfriend’ taasisi.
Sections of this page. Email or Phone Password Forgot account? Guca maalummaa kootii See More.
Sirriitti jabeeffadhu – hinaaftotni ‘hack’ godhanii tokkummaa keenya diiguu danda’u waan ta’eef! Carraa jaalalichaatu na ajaa’ibe! Email or Phone Password Forgot account? Maalaqa itti fuudhu hin qabu Jaalale koo duraan dagachu dadhabe 2.